नेपाली सिने जगतका एक हस्ती नारायण त्रिपाठी, कहाँ गुमनाम थिए ? अचानक काठमाडौंमा भेटिएपछि यस्तो छ उनको प्रतिक्रिया (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityनेपाली सिने जगतका एक हस्ती नारायण त्रिपाठी, कहाँ गुमनाम थिए ? अचानक काठमाडौंमा भेटिएपछि यस्तो छ उनको प्रतिक्रिया (भिडियो)
नेपाली सिने जगतका एक हस्ती नारायण त्रिपाठी, कहाँ गुमनाम थिए ? अचानक काठमाडौंमा भेटिएपछि यस्तो छ उनको प्रतिक्रिया (भिडियो)
August 15, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Kollywood, Male, News, Videos 0
कुनै दिन यस्तो पनि थियो कलाकार नारायण त्रिपाठी नभएको नेपाली फिल्म सायदै बन्थे । उनी नेपाली फिल्ममा हाँस्य कलाकारको रुपमा सबैका लागि चिरपरिचित थिए । त्यो समयका निर्माता निर्देशकले नारायण त्रिपाठीलाई नखेलाएको फिल्म अपुरो जस्तै ठान्थे । उनका त्योबेला फ्यानको संख्या पनि उल्लेख्य थियो । उनी त्यतिबेला अहिलेका महानायक राजेश हमाल जत्तिकै चर्चामा थिए । सँधै हाँस्य कलाकारको रुपमा नेपाली फिल्ममा देखिने कलाकार त्रिपाठी धेरै समय भयो न नेपाली फिल्ममा देखिन्छन् न त सार्वजनिक सञ्चारमाध्याममा कही कतै भेटिन्छन् ।
आखिर कता छन् त कलाकार त्रिपाठी ? लामो समयपछि एक अन्तरवार्तामा भेटिएका त्रिपाठीले उबेलाका फिल्ममा गरेका अभिनयलाई सरसर्ती रुपमा सम्झिन समेत भ्याए । उनलाई पछिल्लो समय जन्मिएको पुस्ताले सायद चिन्न पनि मुश्किल पर्छ । त्यो समयमा नारायण त्रिपाठी, बखते, प्रेम चरो आदी आदी नामले दर्शकमाझ लोकप्रिय थिए । अहिलेसम्म कता थिए त त्रिपाठी ?
कतारको दोहामा ‘रमाइलो साँझ–२०७५’ हुँदै, डान्सर रिया श्रेष्ठ लगायत कलाकारले धमाकेदार प्रस्तुति दिने
‘इवीजा फेसन नाइट’का लागि १४ मोडल छनौट(फोटोफिचर)